कालो मास्क कालो दागहरु को बिरूद्ध | सौन्दर्य समीक्षा
कालो मास्क कालो धब्बेको बिरूद्ध
कालो मास्कको बारेमा समीक्षा जुन स्थिर इन्टरनेटमा फैलँदै छ यसको प्रयोग र प्रभावकारिताको सादगीको लागि एक बढि लोकप्रियतामा विजय हासिल गर्दै। कालो मास्क वास्तवमा के हो भन्ने कुराको फेदमा पुग्न हामी सँगै कोसिस गरौं र किन सबैजनालाई यति मनपर्दो छ। जस्तो देखिन्छ, सुन्दर छाला हुनु कुनै पनि केटीले गर्न सक्ने कुरा हो र यसको लागि उनको फुर्सदको समय बिल्कुलै सौन्दर्य सैलुनमा खर्च गर्नुपर्दैन वा पागल पैसा खर्च गरेर मोइस्चराइजिंग र पौष्टिक उपचारहरू खर्च गर्नुपर्दैन।
कालो मास्क के हो?
यो एक सार्वभौमिक उपाय हो अनुहारको त्रुटिहरू एक पटक र सबैको लागि छुटकारा पाउनको लागि। उपचार प्रयोग गरेर, तपाईं त्यस्ता छाला दोषहरूका बारे बिर्सन सक्षम हुनुहुनेछ:
तपाईंको नाक र अनुहारमा गाढा दागहरू।
यो प्राकृतिक कम्पोनेन्टबाट बाहिर उत्पादन गरिएको छ, त्यसैले यो छालाका लागि सुरक्षित छ र यदि सही तरिकाले प्रयोग गरेको खण्डमा कुनै नोक्सान हुँदैन। निर्माता जोड दिन्छ कि गाढा दागहरूका लागि कालो मास्क सकेसम्म गहिरो प्रभाव प्रदान गर्न सक्षम छ र छालालाई हानी गर्दैन।
सुन्दर, स्वस्थ छाला भन्दा राम्रो के हुन सक्छ? यस मास्कका विकासकर्ताहरूले फेयरर सेक्सको प्रत्येक प्रतिनिधिहरूको लागि प्राकृतिक सुन्दरतालाई बढी पहुँचयोग्य बनाउन कोशिस गरे। यसको उपचार प्राकृतिक कम्पोनेन्टहरूमा आधारित छ र यसले जलन, एक्ने र पिम्पल्सलाई मात्र मेटाउदैन, तर यसले तपाईंको अनुहारमा छालालाई मोइस्चराइज, पोषण, र कायाकल्प पनि गर्दछ।
यस्तो उपचार मात्र युवतीका लागि मात्र उपयुक्त हुँदैन, तर अरूलाई पनि। हर्मोन स्विंग र धेरै छाला समस्याबाट पीडित किशोर-किशोरीहरूले छालाको दागहरू बिरूद्ध कालो मास्क जस्तो कास्मेटिक उपचारको फाइदाहरूको कदर गर्नेछन्।
यस मास्कको बारेमा के रोमाञ्चक छ
धेरै सेलिब्रेटीहरू र मेडिकल व्यक्तिहरू आफैंले आफ्नो अनुहारको लागि कालो मास्क प्रयोग गर्न सफल भएका छन् र यसका बारे सामाजिक नेटवर्क अनलाईनमा धेरै अवसरहरूमा कुरा गरेका छन्। नियमित स्क्रब र अनुहार सफा गर्ने उपचारहरूको तुलनामा कालो दागमा कालो मास्कमा के के फाइदा हुन्छ? उपचारका केही गुणहरू समावेश छन्:
Contraindication को पूर्ण अनुपस्थिति। सम्वेदनशील छाला सहितको व्यक्तिले मास्क प्रयोग गर्न सक्दछन्, जहाँसम्म कालो दागहरू बिरूद्ध मास्कमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण अवयवहरू प्राकृतिक र सुरक्षित छन्।
कम्पोनेन्टहरू पूर्ण प्राकृतिक छन्, जुन छाला हेरचाहको लागि श्रृ make्खलाको उत्तम ब्रान्डले विरलै ब्रेग गर्न सक्दछ।
दुई हप्ताको अनुहारको कालो मास्कको लगातार प्रयोग पछि, सकारात्मक प्रभावहरू नोट गरिनेछ र छाला सफा र सुन्दर हुनेछ।
कम्पोनेन्टहरु धेरै उद्देश्यहरु को लागी एकैचोटि काम गर्छौं छालामा सबै त्रुटिहरु र कालो दाग हटाउन को लागी।
उच्च प्रभावकारिता र दीर्घकालीन परिणामहरू।
कालो मास्कको लागि राम्रो मूल्य, यसको प्रतिस्पर्धीहरूको महँगो मूल्यहरूको बावजुद।
कालो मास्कको मुख्य लाभहरू मध्ये एक यसको दाग दागको बिरूद्ध यसको सादगी र विश्वव्यापीता हो। कुनै पनि महिलाले यसलाई पूर्ण रूपमा र छालाको टाइप र मोटाईको साथ प्रयोग गर्न सक्दछ। तपाईंको छालामा मास्क लागू गरेपछि, तपाईं गृहकार्य गर्न सक्नुहुनेछ र सामाजिक नेटवर्कमा समाचार रिलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, आफैलाई म्यान्सिक्योर दिन सक्नुहुन्छ वा टिभीमा फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आराम गर्दा, मास्क सक्रिय रूपमा काम गर्दछ, पौष्टिक पदार्थहरूको साथ तपाईंको छाला समृद्ध बनाउँछ।
कालो मास्क कसरी प्रयोग गर्ने
अधिकतम प्रभाव उत्पादन गर्नको लागि उपायको क्रममा, यसलाई ठीकसँग प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। कालो मास्कको लागि गाढा स्पटहरू विरुद्ध निर्देशनहरू अत्यन्त सरल छन्:
तपाईं सफा छालामा कालो मास्क मात्र लागू गर्न आवश्यक छ। यस कारणका लागि, तपाईंको अनुहारको कुनै मेकअपबाट छुटकारा पाउन निश्चित हुनुहोस्। नरम तौलियाले तपाईंको अनुहार मेटाउनुहोस् र केहि मिनेट पर्खनुहोस्। तपाईको छाला, लोशन, वा टोनरमा क्रिम प्रयोग गर्नबाट रोक्नु उत्तम हो। यी सबै परिणामहरूमा नकरात्मक टोल लिन सक्छ।
अब तपाईंले आफ्नो अनुहारमा कालो दागका लागि कालो मास्क लागू गर्न आवश्यक छ। यो आँखा क्षेत्र बेवास्ता गर्दा र तपाइँको कपालमा नहुँदा गोलाकार गतिमा उत्तम रूपमा गरिन्छ।
त्यसो भए, मास्क तपाईंको अनुहारमा सुक्नेछ। सामान्यतया यसले आधा घण्टा भन्दा बढी लिन सक्दैन। यस समयमा, तपाईले लागू गर्नुभएको लेयर बिग्रन नदिन र प्राकृतिक रूपमा सुक्खा नपार्नका लागि सक्रिय रूपमा केहि गर्न कोसिस गर्नुहोस्।
आधा घण्टा समाप्त भएपछि र मास्क कडा भएपछि सावधानीपूर्वक हटाउनुहोस्। यसलाई तपाईंको न nails्गको साथ नलगाउनुहोस् वा टुक्रा फाल्नुहोस्। प्रक्रियाको क्रममा तपाईको छालाको माथि कुनै पनि पीडा संवेदना वा जलनु हुँदैन।
अन्तिम चरण धुनु पर्दछ, किनकि मास्कको ट्रेस तपाईंको छालामा यसको सानो टुक्रा सहित रहन सक्दछ। धुने पछि, तपाइँ तपाइँको अनुहार छाला मा पौष्टिक क्रीम प्रकार को लागी लागू गर्न आवश्यक छ जुन तपाइँ वा केवल तपाइँको मनपर्ने मॉश्चराइजर को उपयुक्त छ।
यो प्रक्रिया दोहोरेर र प्रत्येक दिन एक घण्टा भन्दा बढि खर्च नगरी तपाईं कालो दाग, एक्ने, र अन्य छाला दोषबाट द्रुत रूपमा छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं कोमल छाला पाउनुहुनेछ र तपाईंको अनुहारले स्वस्थ रंग प्राप्त गर्नेछ।
मुख्य कुरा भनेको मास्कलाई लागू गर्न र हटाउने सबै नियमहरू पालना गर्नु हो। अन्यथा, तपाईं आफ्नो छालामा चोट पुर्‍याउन सक्नुहुनेछ र उपचारबाट पर्खनुभएको शक्तिशाली प्रभावहरू पाउनुहुन्न। यो चिन्ता गर्न लायकको छैन कि त्यो मास्क खराब छ यदि तपाईं आफ्नो अनुहारबाट आफ्नो श्रृंगार लिन बिर्सनुभयो भने। धेरै कडा तहले कूल गरिएको मास्कलाई झिकेर तपाईंले आफ्नो छालाको समस्या हुने क्षेत्रहरूलाई बिगार्न सक्नुहुन्छ र आफैमा जलन उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
मास्क हटाउन सबै चालहरू सहज र सावधान हुनुपर्छ। तपाईं अधिक सुविधा को लागी ऐनाको अगाडि यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो हटाए पछि तपाईं आफ्नो छालामा टॉनिक लागू गर्न सक्नुहुन्न वा विभिन्न अरामी रक्सीको साथ तपाईंको अनुहार मेटाउन सक्नुहुन्न।
विशेष रूपमा यस पलको समयमा, तपाईंको अनुहारको छाला धेरै कमजोर छ र धेरै सूक्ष्मजंजरी तपाईंको छालाको खराब अवस्थाको flaking र यसको pores को सफाईको कारण। त्यस्ता कार्यहरूले तपाईंको छालामा अपूरणीय क्षति निम्त्याउँदछ, जलन हुन सक्छ, र छालाको रातो र पीडादायी संवेदनाहरूको परिणाम हुन सक्छ। यो मास्क प्रयोग गर्दा, निर्देशनहरूलाई ध्यानपूर्वक पालना गर्नुहोस् र बाधामा नपार्नुहोस् किनभने यो तपाईं र तपाईंको सुन्दरताको लागि अँध्यारो स्थानमा जान सक्छ।
कालो दाग बाहिर बनेको मास्क के हो?
कुलमा, त्यहाँ काला अनुहार मास्कमा लगभग एघार घटकहरू समावेश छन्। तर मुख्य र सबैभन्दा महत्त्वपूर्णहरू केवल तीनमा तल आउँछन्:
बाँसको कोयला कोष पाउडर: यस कम्पोनेन्टले छालालाई बोसोले सुक्खा बनाउँदछ र थप छाड्न मद्दत गर्दछ, छाला कोषहरूलाई नुन बनाउने र सफा pores को रूपमा कार्य गर्दछ;
गहुँ को अंकुरमा आधारित तेल तयार। यसका लागि धन्यवाद, छाला पौष्टिक हुन्छ, हेम मॉश्चराइजिंग, र सानो अनुहार घाउ। पदार्थको प्रभाव अन्तर्गत, यी छिद्रहरू पदार्थको प्रभावको अन्तर्गत साघुँरो देखिन्छ र रक्त संचार अनुहार क्षेत्रमा पुग्छ। तेलले छालालाई द्रुत रूपमा नवीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, यस बीचमा सूजन चाँडै प्रभावित क्षेत्रहरू छोड्छ;
कीटाणुशोधन र फgal्गल संक्रमण रोकथाम प्रदान। यसको मद्दतले अनुहारमा झुम्काइ सजिलो हुन्छ जबकि हेम्स र अन्य त्रुटिहरू कम देख्न सकिन्छ। केहि यसको अतिरिक्त कार्यहरूको के रूप मा मान्न सकिन्छ कायाकल्प र मॉइस्चराइजिंग हो, जुन महिलाहरूको लागि यति राम्रो छ।
यी घटकहरू बाहेक, निम्न घटकहरू कालो मास्कमा गाढा दागहरू बिरूद्ध समावेश गर्न सकिन्छ:
यी पदार्थहरूको क्युरेटिभ र कस्मेटिक गुणहरू सयौं बर्ष भन्दा धेरै पहिले नै ज्ञात छ। त्यस समयमा, शारीरिक देखभालको उपचारको अभावका कारण महिलाहरूले तथाकथित "हजुरबा विधिहरू" प्रयोग गर्थे। पिम्पल्स र अन्य छालाका दोषहरूबाट मुक्त हुनको लागि तिनीहरूले आफ्नो अनुहार सफा गर्ने भीड इन्फ्युसनहरू र अन्य बोटबिरुवाले सफा गरे।
अब, सबै कुरा धेरै सजिलो भएको छ र त्यहाँ बिरुवाहरु को स्वस्थ सुविधाहरु को विश्लेषण गर्न को आवश्यकता छैन, यसको सही अनुपात र उपचारहरु बनाउन को व्यंजनहरु थाहा छ। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको तपाईको आफ्नै सुन्दरता लाई बढाउनु हो र सँधै समस्याग्रस्त छालाबाट छुटकारा पाउनु पर्छ।
कालो मास्कमा समीक्षा
आज, अनलाइन यो कालो मास्क समीक्षा पाउन एकदम सजिलो छ जसले पहिले नै यसलाई अर्डर गर्ने र यसलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्थित गरेका छन्। हामीले ती मध्ये सबैभन्दा राम्रो जानकारीलाई भेला गरेका छौं, दुवै नराम्रो र राम्रो, उत्पादको सब भन्दा सटीक समझ प्रस्तुत गर्नका लागि।
Kate 25 वर्ष पुरानो:
“लामो समय सम्म, म कालो मास्कको प्रभावमा विश्वास गर्दिन। अँध्यारो स्पटहरू जहिले पनि मेरो समस्या हुन्थ्यो। मलाई लाग्यो कि यो मास्क मेरो लागि पूर्ण रूपले बेकार हो र यो राम्रोसँग विज्ञापन गरिएको थियो। कोसिस गरेपछि मैले आफ्नो विचार परिवर्तन गरें। यसले आश्चर्यजनक प्रभावहरू प्रदान गर्दछ। जब म यो बन्द गर्दछ, भावना को लागी एक महँगो सैलुन मा एक प्रक्रिया पूरा छ भने। मसँग यसको जन्मदिनको लागि मेरी आमासँग यो मास्क छ र अब उनी र म यसलाई सँगै प्रयोग गर्दछौं। यसको एउटा नकारात्मक पक्ष भनेको यो हो कि त्यहाँ धेरै नक्कलीहरू छन् जुन आधिकारिक प्रतिनिधिबाट अर्डर गर्नु राम्रो हो, अन्यथा तपाईं नक्कलीले धोका खान सक्नुहुन्छ। ”
सुसान 27 वर्ष पुरानो:
"मेरो मिल्ने साथीले मलाई मेरो जन्मदिनको लागि यो मास्क लगायो। कुरा यो हो कि मसँग साँच्चै गम्भीर अनुहारको छाला समस्या थियो। यस एक त्वचा विशेषज्ञसँगको उपचारले मेरो लागि कुनै सफलता प्राप्त गरेन। मैले मास्क को बारेमा एक महिना को लागी प्रयोग गरें र तुरुन्तै मैले देखिने परिणामहरू देख्न थालें। मेरो र even्ग बाहिर भयो, एक भयानक एक्ने दाग गयो, र म वास्तवमै सुन्दर भयो! अब मैले ती चीजहरूको धेरै प्याकहरू एकै चोटि खरीद गरें कि, मसित मेरो आपूर्ति छ कि छैन भनेर। ”
प्रख्यात कालो मास्क प्राप्त गर्दै
आधिकारिक प्रतिनिधिबाट कालो मास्क लिनको लागि उत्तम हो। त्यसोभए तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि यो वास्तविक हो र रेशे वा एलर्जीको कारण हुँदैन। यदि तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा यसलाई खरीद गर्नुभयो भने तपाईं सजिलै नक्कली भेट्टाउन सक्नुहुन्छ र तपाईंको पैसा खेर फाल्न सक्नुहुन्छ।
उपहारको रूपमा किनेको कम गुणवत्ताको प्रतिलिपिले व्यक्तिको मुड र छाला बिगार्न सक्छ र तपाईंलाई मित्रता गुमाउन सक्छ। सामाजिक नेटवर्क वा तेस्रो-पार्टी साइट मार्फत सस्तो विकल्प खोज्न प्रयास गर्नु बेकार छ।
काला मास्कको कारण चकित भएका धेरै सेलिब्रेटीहरूले यसलाई एक अधिकृत व्यक्तिबाट मात्र प्राप्त गरेका छन्। नक्कली खरीद गरेर अनावश्यक जोखिमको अधीनमा नपर्नुहोस्।
आधिकारिक साइटमा तपाईलाई आवश्यक सबै जानकारी फेला पर्नुहुनेछ, उत्पादको बारेमा, यसको डेलिभरी विधिहरूको बारेमा, र अर्डर भुक्तानको बारेमा। कालो दागहरूका लागि एक मात्र वास्तविक कालो मास्कको फाइदा लिनुहोस् र हरेक दिन थप अद्भुत बन्नुहोस्!